मेरो नाम बिवेक घिमिरे हो । म हाल 22 बर्षको भए । कुरा आज भन्दा झण्डै ७-८ बर्ष अगाडीको हो, म आफ्नो एस. एल. सी. परीक्षा सकेर कलेज पढ्नको लागि काठमाण्डु तिर लागे । काठमाण्डुमा दाजु भाउजुको घर थियो । म त्यँही बस्न थाले । एस. एल. सी. को रिजल्ट आई नसकेको हुनाले खाली समय बिताउन ENGLISH LANGUAGE सिक्न थाले । पाटनको एउटा ईन्स्टिच्युटमा भर्ना भएँ । विहान ७ बजे देखि १० बजे सम्म कक्षा हुन्थ्यो र दिन भरी घरमा नै बस्थे । गाउँ बाट आएको हुनाले शहरी जीवन बिताउन गाह्रो भईरहेको थियो । दुःख सुख यसरी नै दिनहरू विताउँदै थिए । २ महिना जति बित्यो होला , एक दिन म आफ्नो कक्षा सकेर घर पुगे । त्यहाँ एक जान केटीलाई देखे । भाउजुले मलाई उनी सँग परिचय गराईदिनु भयो , उनी भाउजुको आफन्त रहिछन् । उनको नाम सुशिला रहेछ । करिब १५-१६ बर्षकी थिईन उनि । दुब्ली तर राम्री । पहिलो भेटमा त मुसुक्क मात्रै हाँसिन । एक दिन मैले उनीलाई काठमाण्डु आउनुको कारण सोँधे , र भनिन , “गाउँमा राम्रो क्याम्पस छैन , अनि यतै पढ्न आएको ।”
बिस्तारै दिनहरू बित्न थाल्यो । हाम्रो एस. एल. सी. को रिजल्ट पनि आयो । म फस्ट डिभिजनमा पास भएछु र सुशिला चाँहि सेकेन्डमा पास भईछन् । हामी दुबै जना खुशि थियौ । अब कुन क्याम्पस पढ्ने भन्ने तिर कुरा हुन थाल्यो । मैले चाँहि पाटन क्याम्पस मा साईन्स पढ्न भर्ना गरे र सुशिलाले चाँहि कमर्स पढ्न । हामी बिच अब धेरै कुरा हुन थालि सकेको थियो । भोलि देखि क्याम्पस जानु पर्ने हुनाले बेलुका छिटै खाना खाने निधो गर्यौ र खाना खाई सकेपछि सुशिला र म मेरो कोठामा बसेर गफ गर्न थाल्यौ । करिब १० बजे तिर उ आफ्नो कोठा तिर सुत्न गई । बिहान उ पहिला उठ्ने गर्थि र मलाई उठाउँथि । अनि नित्य कर्म सकि चिया र खाजा खाएर हामी ६ बजे तिर कलेज लाग्थ्यौ । बाटो भरि गफ गर्दै क्याम्पस।पुग्थ्यौ र आ-आफ्नो पढाई तिर लाग्थ्यौ । ११ बजे तिर फेरि भेट हुन्थ्यो र हामी घर फर्कन्थ्यौ । यसरीनै दिनहरू बित्न थाले । एक रात म ११ बजे तिर ब्युँझे र ट्वाईलेट गए । ट्वाईलेटबाट बाहिर निस्केर कोठा तिर जाँदै थिए , सुशिलाको कोठाम बत्ती बली रहेको देँखे । मैले उसको ढोकाबाट चिहाएर हेरे , सुशिला त नसुति खाटमा बसिरहेको रहिछन । अनि म उनको कोठामा छिरे र सोधेँ , “के भयो सुशिला , किन नसुतेको ?” उनले भनिन , “खोई निद्रै लागेन , कता कता डर लागि रहेको छ । किन हो किन ? तपाईलाई अप्ठ्यारो हुँदैन भने एक छिन म सँग बस्नुहोस न ल ।” मैले हुन्छ भने र उनको खाटमा खुट्टा तिर बसे । उनि शिरक ओढेर बसि रहेकी थिईन् । मौसम चिसो चिसो भएकोले मलाई पनि अलि जाडो महसुस भईरहेको थियो । उनीले थाहा पाईछन क्यार , उनले भनिन, “तपाईलाई जाडो भए जस्तो छ , शिरक ओढ्नुहोस न।” मैले “हुन्छ” अनि उनको छेउमा बसेर शिरक ओढे । म कहिले पनि केटि सँग यसरी बसेको थिईन । मलाई अलि अप्ठ्यारो महसुस हुन थाल्यो । दुबैजना चुप चाप बसि रहेको थियौ , अचानक सुशिलाले मलाई अङ्गालो हालि र मेरो छातीमा टाउको राखेर सुकसुकाउन थालि । मैले “के भयो ?” भनेर सोँधे । उनले “घरको , आमा – बुवाको , भाई – बहिनीको धेरै याद आयो ” भनि । त्यसपछि मैले पनि उनलाई अङ्गालो हाले र उनको ढाँडमा हातले सुमसुम्याउन थाले । केहि बेरमा मलाई पनि असह्य भयो र उनको ओठमा चुम्बन गर्न थाले । उनीपनि मलाई चुम्बन गर्न थाली । उनको ओँठ बिस्तारै चुस्न थाले र मेरो जिब्रो ले उनको जिब्रो खेलाईदिन थाले । उनी स्वाँ – स्वाँ गर्दै लामो लामो सास फेर्न थाली । बिस्तारै बिस्तारै उनको शरीर शिथील हुँदै गयो ।
त्यसपछि मैले बिस्तारै मेरो हात उनको दुधको पोका तिर सार्न थाले । टि-शर्ट बाहिर बाटै दुधको पोका र मुण्टा माड्न थालेँ । शुरुमा त डर लागि रहेको थियो , रिसाउने पो हो कि भनेर , तर मेरो कामको कुनै प्रतिकार नगरेको हुनाले मैले पनि साहस गरेर बिस्तारै उनको टि-शर्ट खोल्न खोजे । तर पनि केहि भनिनन् र मैले उनको पुरै टि-शर्ट खोलिदिएँ । अब उनको दुधको पोकालाई केवल रातो ब्रा ले मात्रै छोपेको थियो । ब्रा बाहिरबाटै मैले उनको दुधको पोका माड्न थाले । त्यसपछि बिस्तारै ब्रा को हुक पनि खोलिदए र टेबल तिर फ्याँकिदए । अब उनको छाति को भाग पुरै नाङ्गो थियो । मैले बिस्तारै उनी तिर हेरे , उनि आँखा बन्द गरेर चुपचाप बसीरहेकी थिईन । अब सुशिलाको दुईटै दुधको पोका मेरो हाथमा थियो । मैले बिस्तारै बिस्तारै दुधको मुण्टा माड्न थाले । उनि सुस्केरा लिन थालिन । एकछिन हातले खेलाए पछि उनको मुण्टो चुस्न थाले , बिस्तारै टोकिदिए । “आईय्या , दुख्यो ।” भनेर कराउन थालि । फेरि हातैले खेलाउन थाल्यो । यता मेरो लाडो पनि ठन्किसकेको थियो । जीवनमा पहिलो पटक मैले यस्तो अनुभव गरेको थिए । जे होस साथीहरूसँग कहिले काँहि ब्लू फिल्म हेर्ने गरेकोले अलि अलि आईडिया थियो । त्यस पछि मैले सुशिलाको पाईन्ट तिर हात लगेर उनको पुती खेलाउन खोजे । तर जिन्सको पाईन्ट भएकोले राम्ररी छुन सकिन । अनि बिस्तारै पाईन्टको बटन खोल्न थाले । तर सुशिलाले “नाई ! पाईन्ट नखोल्नु न ” भनि । तैपनि म मानिन र जबरजस्ती खोल्न थाले । “केहि पनि हुन्न क्या , एकछिन त हो नि । नत्र भए म तिमी सँग बोल्दिन नि !” मैले भने । त्यस पछि सुशिला केहि बोलिनन् । बिस्तारै पाईन्टको बटन र चेन खोलिदिएँ र पाईन्ट फुकालिदिए । सुशिलाले रातो पेन्टी लाएको रहेछ । यसो पुती तिर हात लगेको त हातनै चिसो भयो । अनि मैले सोधे , “पेन्टीमा मुतेको हो ?” उनि लजाउँदै भनिन , “कहाँ हुनु , आफै पानी झरेको नि । केटीहरूको त पानी झर्छ नि , थाहा छैन ? ” “ए हो र !” मैले भने । अनि पेन्टी पनि खोलिदिएँ । जिन्दगीमा पहिलो पटक मैले कसैको पुती यसरी हेर्न पाएको थिए । कालो भुत्ला वरिपरि अनि बिचमा रसाएको सानो पुती, कति लोभ लाग्दो थियो । BLUE FILM को सिन सम्झन थाले र उनको पुती भित्र औला हालिदिए । “आह!!! – आह!!!” भन्दै सुशिला कराउन थालि । मलाई पनि खपि नस्क्नु भएर आयो । मैले पनि मेरो पाईन्ट र कट्टु खोले र उनको हात मेरो लाडोमा राखिदिए । “ओहो ! कस्तो कडा भएको ? कति मोटो ?” सुशिलाले भनिन । अनि मैले सोधे “तिमीले अरुको पनि लाडो देखेको थियौ पहिला ?” “केटा केटीहरूको त सानो हुन्छ त ।” सुशिलाले भनिन । “त्यो त हो नि , तर उमेर बढ्दै गएपछि लाडो पनि त ठुलो हुँदै जान्छ नि त । ” मैले भने । त्यसपछि म सुशिलाको माथि चढे र उनको पुतीमा मेरो लाडो छिराउन खोजे । शायद पहिलो पटक भएकोले होला , घरि यता – घरि उता चिप्लिन थाल्यो । पुतीमा छिरे-नछिरेको थाहा नै पाउन सकिन । अनि सोधेँ,”भित्र छिर्यो ?” “छैन ।” सुशिलाले भनिन् । त्यसपछि मैले उनको खुट्टा फाट्न लगाए अनि हातले मेरो लाडो उसको पुतीको मुखमा राखे र बिस्तारै छिराउन खोजे । अहिले चाँहि छिरेछ , “आईय्या ! दुख्यो ! पोल्यो ! निकाल्नु न ।” भनेर सुशिला कराउन थालि । मलाई पनि डर लाग्यो र लाडो बाहिर निकाले । ब्लू फ्लिममा थुक लगाएको देखेको थिए , अनि लाडोमा थुक दले र फेरि बिस्तारै छिराउन थाले । लाडो अलि चिप्लो भएछ क्यार सजिलै सित सुशिलाको पुतीमा छिर्यो । सुशिला बिस्तारै बिस्तारै कराउन छाडी , अनि मैले पनि बिस्तारै बिस्तारै मेरो लाडोलाई भित्र बाहिर गर्न थाले । अब त सजिलै सँग छिर्न थाल्यो । यसो पुतीमा हेरेको त अलि अलि रगत पनि आई रहेको देखे र सेतो पानी पनि झरेको देखे । शायद सुशिलाको पुतीबाट पानी झरेकोले गर्दा होला , मेरो लाडो सजिलै पुतीमा छिर्न थाल्यो । पहिलो पटक कुनै केटीलाई मैले यसरी चिक्दै थिए । करिब ३-४ मिनेट चिके पछि म छाँगाबाट झरे जस्तो भए र मेरो लाडोबाट माल झर्यो । म शिथील भए र मेरो लाडो पनि नरम हुन थाल्यो । अनि म फेरि सुशिलाको दुध चुस्न थाले र सोधे , “सुशिला, कस्तो महसुस भयो ?” सुशिलाले रुन्चे स्वरमा भनिन – “रमाईलो भयो , तर अलि अलि पुती पोलिरहेको छ । मजा आयो ।” मैले भने , “पहिलो पटक यस्तै हो , फेरि गर्दा दुख्दैन । अब फेरि भोलि पनि गर्ने ल ! ” उनले “हुन्छ” भनि र म खाटबाट उठे अनि कपडा लगाउन थाले । सुशिलाले पनि लुगा लगाईन । “रात धेरै बितेछ , अब सुतौ ल !” मैले भने र उनलाई एकपटक ओठमा चुम्बन गरि म आफ्नो कोठातिर लागे… ।
ममि बाहिर जानुभएको मौका पारेर शुुशिलालाई चिकेको कथा 2016-08-25T17:33:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Bikas Gurung
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: ममि बाहिर जानुभएको मौका पारेर शुुशिलालाई चिकेको कथा